माओवादीका कारण यो देशमा अचम्मैअचम्मका घटना ! | चितवन पोष्ट दैनिक
माओवादीका कारण यो देशमा अचम्मैअचम्मका घटना !
२०७१ चैत्र २७, शुक्रबार ०१:४७ गते
नसोचेको र नचिताएको कुरा भएपछि वा देखिएपछि वा परिणाम नै आकाश–जमिनबराबरको फरक परेपछि अचम्म हुन्छ । नेपालको राजनीतिक फाँटमा पनि एउटा अचम्म देख्न प¥यो । त्यो अचम्म हो–नेपालमा माओवादी पार्टीको उत्पत्ति, विकास र पतन उन्मुख अवस्था । व्याख्याको शुरूवात यताबाट गरौँ । पहिलो अचम्म हो, नेपालजस्तो सामन्तहरुलाई पूजा गर्ने बहुसंख्यक मध्यम वर्गीय जनता भएको देश । मध्यम वर्गीय जनताको अर्थ हुन्छ, पूराका पूरा अवसरवादी चरित्र भएको मान्छे वा उसको समूह । यसरी हेर्दा बहुसंख्यक अवसरवादी मान्छे भएको, चरित्रले नै उनीहरुले शक्तिशाली सामन्तहरुलाई पूजा गर्ने, कमजोरलाई लखेट्न सामन्तकै चाकडी गर्ने, उसका अगाडि हो हजुर, हुन्छ हजुर भन्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लम्पसार परेर झुक्ने खालको चरित्र भएको अवसरवादीहरुका माझमा साम्यवादलाई लक्ष्य बनाएर सजिलो वा अप्ठ्यारो जुनसुकै बाटो हिँड्न पछि नपर्ने, यसका लागि मर्न, मार्न, हतियार बोक्न, बोकाउन पछि नपर्ने कम्युनिस्टहरुको जन्म हुनु आफैँमा अचम्मको विषय थियो । एकलट अचम्म यो देशमा २०५२ सालमा भयो । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न नछाड्ने तर सजिलो बाटो मात्रै हिँड्ने, मीठोमसिनोमा ¥याल चुहाउने, भौतिक सुविधामा लुटपुटिन सधैँ तयार हुने, निकै चतु¥याइँपूर्वक जसजति आफू लिने तर अपजसजति मलाई थाहा छैन वा कसैको निजी विचार वा त्यस्तै–त्यस्तै बहाना बनाएर अर्काको टाउकामा हाल्ने र रातो पृष्ठभूमिमा हँसिया–हथौडाको चित्र टाँसेर ¥याइँ¥याइँ घुमिरहने, आफूलाई विश्वास मान्नेहरुलाई पनि त्यही ¥याइँ¥याइँ पाराले घुमाइरहने कम्युनिस्ट पार्टीहरु त नेपालमा बग्रेल्ती थिए ।
त्यो ०५२ साल फागुन १ गतेबाट आफूलाई माओवादी बताउँदै नेपाली जनताको एउटा सानो हिस्साले पुरानो शक्तिशाली राज्यसत्ताको विरूद्धमा हतियार उठायो । त्यो समूहका नाइकेहरु मध्ये एकले दिएका अन्तर्वार्तामा व्यक्त विचारअनुसार प्रारम्भमा उनीहरुसँग एउटामात्रै बन्दुक थियो, त्यो पनि कुनै लाहुरेले लाइसेन्स लिएर राखेका । त्यो बन्दुक सापटी मागेर त्यत्रो बडेमाको राज्यसत्तासँग सिँगौरी खेल्न उ बेलाको माओवादी तम्सियो । पुष्पकमल दाहाल नामका बोलीमा जादु भएका लडाकु खालका नेपाली नागरिकको नेतृत्वमा त्यो जनयुद्ध नाम दिइएको आन्दोलनको शुरूवात भयो । यही अचम्म थियो कि एक त अवसरवादी नागरिकहरुको बाहुल्यता भएको देश, शक्तिका अगाडि झुक्ने र चाकडी गर्नेहरुको बिगबिगी भएको समय र विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरुसँग मितेरी साइनोसमेत गाँसेको पुरानो राज्यसत्ता जो शुरूवातका लडाकु माओवादीभन्दा कयौँ गुणा शक्तिशाली थियो नै । अन्दाज गर्नेहरुले त्यो बेलाको माओवादीलाई हात्तीको अगाडि कमिलो अन्दाज गरे, अर्थात् पुरानो सत्ताचाहिँ हात्ती र त्यो सत्तासँग एउटा पुरानो बन्दुक बोकेर सिँगौरी खेल्न तम्सिएको माओवादीचाहिँ कमिलो । यही मूल्यांकन प्रायः सबैले गरेका थिए । अचम्म यहीँनेर भयो । नेपालका पहाडी जिल्लाहरुबाट नेकपा माओवादीले आफ्नो संगठन विस्तार गर्दै गयो । जतिजति पुरानो सत्ताले दमन गर्दै गयो, माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता र माओवादीका नाममा जतिजति नागरिकहरुको पुरानो सत्ताले विनास गर्दै गयो, उतिउति माओवादी फस्टाउँदै गयो । बिचरा माओवादीहरु ! एउटा बन्दुक र गुलेली अनि घरेलु हतियार खुकुरी र चुलेसीका भरमा शक्तिशाली राज्यसत्तासँग जोरी खोजिरहेको छ भन्ने भ्रम पाल्दै आनन्दसाथ पुरानो सत्ता र पुरानो सत्तालाई परमात्मा स्वीकारेर सत्ताको स्वादमा लुटपुटिन पुगेकाहरु एकतमासले अलमलिइरहे । उता, माओवादीले पुराका पूरा गाउँलाई माओवादीमय बनाउँदै लगे । बिस्तारै–बिस्तारै हतियार संकलन गर्र्दै गए । पैसा संकलन गर्दै गए । पुराना सत्ताका नोकर, चाकर र जासुसहरुलाई सखाप पार्दै अघि बढे । पछिल्लो अवस्था खरायो र कछुवाको कथासँग मेल खाने किसिमले परिस्थिति निर्माण हुँदै गयो । मलाई दौडिएर कछुवाले कहिले पो भेट्ने हो र ! एकछिन सुतेर आराम गर्छु । कछुवा नजिक आएपछि उठेर दौडिन्छु र कछुवालाई उछिन्छु भन्ने खरायोवाला चिन्तन उतिबेलाको पुरानो सत्तालाई अँगालो मारिरहेकाहरुमा देखा प¥यो । अर्कोतर्फ, कछुवाकै पाराले माओवादीले पुरानो सत्तालाई डगमगाउन बाध्य पार्ने किसिमले बन्दोबस्तीका सामान संकलन गरिरहेका थिए ।
०५२ सालबाट अघि बढेको सशस्त्र द्वन्द्वले दस वर्षको अवधि पार गर्दा नगर्दा मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षति भयो । मुलुकमा माओवादी भनिने नेपाली नागरिकहरु मारिए । प्रहरीको बर्दी लगाएका नेपाली मारिए । माओवादीका नाममा सर्वसाधारण नेपाली मारिए । जासुसी गरेको नाममा माओवादी पक्ष र सत्तापक्षबाट नेपाली जनता मारिए । जनताको गणनामा परेका बालबालिका मारिए । विभिन्न पेसामा आबद्ध नेपाली नागरिकहरु मारिए । तर, जति संख्यामा नेपाली मारिए पनि न माओवादी सकिने अवस्था, न पुरानो सत्ताले घुँडा टेक्ने अवस्था सिर्जना भयो । जित–हारको परिणाम कुर्दासम्ममा प्रचण्ड, गिरिजा, ज्ञानेन्द्रजस्ता दुई–चार जनामात्र बाँकी रहने तर यिनलाई छाडेर अरु सबै नेपाली खरानी हुने हो कि भन्ने खालको अवस्था सिर्जना भयो । छिमेकीहरुले हाम्रो देशभित्रको आन्तरिक लडाइँलाई तमासा मानेर निकै लामो समय हेरे ।
प्रारम्भमा माओवादीले राजासँग मिलेर संसद्वादी दललाई पाखा लगाउन चाह्यो । संसद्वादी दलहरुले पनि राजासँग मिलेर माओवादीलाई खरानी पार्न चाहे । राजाले दुवैलाई लडाएर आफू सत्तामा उक्लिने र कहिल्यै नओर्लिने सपना देखे । त्यतिबेलै विदेशी शक्तिले कुनै एउटा शक्तिलाई परास्त गरिदिँदा नेपालमा द्वन्द्व समाप्त हुने ठाने र माओवादी र संसद्वादी दलहरुलाई आफ्नो भूमिमा बोलाएर मासुभात खान दिए । कान मन्तरे र अँगालो मार्न लगाए । अर्थात्, राजतन्त्रलाई हटाएर दुई पक्ष मिलेर शासन गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने अर्ती र उपदेश दिए । अर्तीलाई शिरोपर गरेर माओवादी र तत्कालीन संसद्वादी सात दलबीच १२ बुँदे सम्झौता सम्पन्न भयो र राजतन्त्रको विरूद्धमा आन्दोलन भयो । राजा बन्ने ट्रेनिङसमेत नलिएका, चिट्ठा वा चौका परेर राजा भएका व्यापारी अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले स्वदेशी राजनीतिक शक्ति र विदेशी शक्तिका अगाडि १९ दिनमा घुँडा टेके । बिस्तारै–बिस्तारै माओवादी र संसद्वादी दल सत्तामा उक्लिन शुरू गरे । माओवादीलाई सत्तामा उकाल्ने परिस्थिति निर्माण गर्दै पहिले गिरिजा उक्लिए । तीन शक्तिमध्ये राजतन्त्र हारेर नागार्जुनतिर हिँड्यो । संसद्वादी र माओवादी मगमग बासना आउने सत्तामाथि उक्लिने प्रक्रिया अघि बढ्यो ।
२१औँ शताब्दीको यो नवीन युगमा माओवादी खालको लडाइँ कहीँकतै सफल भएको छैन । निकारागुवा, पेरूलगायत विश्वका जहाँकहीँ माओवादी वा विचारधाराका पहिया गुडाउँदै आन्दोलन गरिएको छ तर सफल भएको छैन । तर, अचम्म यही देशमा भयो ! माओवादी आधा सफल भयो । दृश्य÷अदृश्य रुपमा दुई दर्जन हजारजति जनता खरानी भएपछि हतियार फालेर भोटको राजनीतिमा आउने वाचाका साथ सत्तामा उक्लियो । यो उत्पातकै अचम्म थियो ! नेपालका भारेभुरे राजनीतिक विश्लेषकमात्रै होइन, अमेरिका सञ्चालन गर्न राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिने माहिर अदृश्य शक्तिहरु समेतले अचम्म माने । अन्य देशका विश्लेषकहरु पनि अनुमानमा फेल
भए । यो एउटा अचम्म त भएकै थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्तो नेपाली राजनीतिमा खाइखेली शेर पल्टिएका पार्टीका अगाडि जनताको घरमा गएर भोट माग्ने अनुभव नभएका माओवादीहरु चुनावमा पत्तासाफ हुन्छन् भन्ने अनुमान विकसित मुलुकका राजनीतिक पण्डितहरुले गरेका थिए । कम्युनिस्टको नाममा चुनाव लडेपछि एमाले र माओवादीबीच मत क्रस हुने हुँदा कांग्रेसको बहुमत आउने र एमाले–माओवादी तल पर्ने अनुमान थुप्रैले गरे । तर, फेरि अचम्म दोहोरियो ! प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले स्पष्ट बहुमत नल्याए पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी भयो । सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गरे ।
विश्व इतिहासमा अचम्मको तरिकाले, पत्याउनै नसकिने पाराले झुल्किएको माओवादीले नेपाललाई विकास निर्माणको बाटोमा गतिलैसँग डो¥याउने अनुमान सबैले गरे । तर, अर्को अचम्म थपियो ! माओवादी नेतृत्वको सरकारले माखो मारेन । भर्खर साइकल चलाउन सिकेको बच्चाले साइकल हाँकेको पाराले लन्ठ्याङ् र मन्ठ्याङ् गर्दै प्रचण्डले सरकार चलाए । सेनापतिसँग बेफ्वाँकमा निहुँ खोजे । देश विकासको सपना देखिरहेका जनताका अगाडि पशुपतिको पूजारी फेर्ने लफडामा
फसे । एउटा फोटो सिंहदरबारमा झुन्ड्याएर ९ महिनाको समय खेर फालिदिएर प्रचण्ड सडकमा आइपुगे । यो पनि अचम्म नै थियो ! फेरि अर्को अचम्म होला जस्तो अवस्था देखा
प¥यो । माओवादी साख गिर्दै, पार्टी टुटफूट हुँदै कमजोर हुँदै, तेस्रो शक्तिका रुपमा देखा पर्दै आएको यो यतिबेलाको एकीकृत नेकपा माओवादी कुन्नि के खालको राजनीतिक मुद्दा बोकेर हिँडेको छ, जसका कारण जनताले वाहवाह गरेको धेरै भएको छैन । तिनै जनताले अब यो पार्टीले आउने चुनावमा सोचेभन्दा धेरै कम सिट जित्छ भन्न थालेका छन् । नपत्याए प्रचण्ड आफैँ जनमत बुझ्न सहरदेखि गाउँगाउँसम्म पुग्दा हुन्छ । यो अर्को नम्बरको अचम्म भएको छ भने कुनै एउटा पत्याउनै नसकिने अचम्म त हुने होइन ?
नेपालमा प्रजापरिषद् नामको पार्टी थियो, त्यो अहिले छैन । चल्न र चलाउन नजानेकै कारण आज त्यो पार्टीको अस्तित्व छैन । भारतमा महात्मा गान्धीले अंग्रेजलाई सत्याग्रहमार्फत लखेटेर स्थापना गरेको, जवाहरलाल नेहरू जस्ताले हाँकेको, इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धी हुँदै सोनिया गान्धीको पालासम्म एकछत्र राज गरेको कंग्रेस आई पार्टी आज निकै कमजोर भएको छ । दिल्लीमा ७० मध्ये ६७ सिट आम आदमी पार्टी र ३ सिट भाजपा । देशैभरि भारतीय जनता पार्टी । बिहारमा नितिशकुमार । पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जी । इलाहावाद र राय बरेलीमा मात्रै सीमित भएर कंग्रेस आईको अस्तित्व सुरक्षित रहन सक्दैन । भारतको त्यति लामो इतिहास बोकेको पार्टीको त त्यो अवस्था बन्दोरहेछ भने यही तरिकाले गाँजेमाँजे हुँदै जाने हो भने प्रचण्ड नेतृत्ववाला एमाओवादी प्रजापरिषद्को हालतमा पुगेर अर्को एउटा अचम्म थपिने त होइन ? अनुमानमात्रै गरिएको हो । प्रचण्ड जी, माइन्ड नगर्नुहोला ।